African Aerospace - Flame Lilly Hoopa gets Zimbabwe flying
Zimbabwe�s ailing aviation industry has been fed a lifeline to aid its regional tourism business.
National carrier Air Zimbabwe has joined up with Botswana’s Mack Air in a partnership arrangement that will see the two airlines operate routes from Harare and Victoria Falls to popular tourist destinations such as Hwange, Kariba and Chiredzi, as well as develop daily air links between Zimbabwe and Botswana, Mozambique and South Africa.
The two airlines will operate a Cessna Grand Caravan from Mack Air and and Air Zimbabwe’s Embraer 154 jet aircraft.
“Mack Air and Air Zimbabwe signed an agreement for the launch of the “Flame Lilly Hoopa” domestic and regional air service in Harare, Zimbabwe on July 4, 2019,” the two airlines said in a joint statement.
Air Zimbabwe has been struggling to have aircraft available for servicing the routes due to lack of finance to pay for maintenance as it is burdened by legacy debts.
The news of the partnership is good news too for Kariba and Hwange Airports as daily services will ensure that upgrade work will continue. They will also bring a boost to tourism industry in the regions.